Dowladda Federaalka oo xanibaadii Hargeysa-Muqdisho dib ula noqotey - iftineducation.com
Dowladda Federaalka oo xanibaadii Hargeysa-Muqdisho dib ula noqotey
iftineducation.com – Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya ayaa dib ula noqotey go’aan ay soo saartey 1 Feberaayo oo sheegaya in 21 bisha Feberaayo wixii ka danbeeya la xanabiyo duulimaadyada Muqdisho iyo Hargeysa isaga kala gooshi jirey.
Gen. Gaafow Taliyaha laanta socdaalka ayaa sheegay sababta go’aankan ay u gaareen ay ahayd, go’aamo ka soo baxay Somaliland, kaas oo la xiriira in dadka socdaalka ah lagu khasbaayo in ay goostaan warqad la yiraahdo Go Home, lacag dheeraad ahna laga qaadayo.
War-saxaafadeed ka soo baxay Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in go’aankii hore uu ahaa mid ku socdey shirkadaha duulimaadyada, kadib markii ay is arkeen madaxda shirkadaha la isku fahmey, oo la xaliyey cabashooyinkii jirey.
Go’aankii ka soo baxay Dowladda Federaalka bilowgii Febaraayo wax badan ayaa kadib is-bedalay, maalin kadib go’aankaas waxaa bom la saarey diyaaradda Daallo Airlines kaas oo hawada lagu qarxiyey, waxaa ku geeriyoodey ninka lagu eedaynayo in uu masuul ka ahaa weerarka oo ka soo jeeda Gobolada Somali-land maamusho.
Al-Shabaab ayaa weerkaas sheegtey waxaana ay sheegeen in ujeedada weerarku uu ahaa diyaaradda Turkish Ailines oo maalin kahor joojisey duulimaadkeedi, rakaabkeedina ku wareejisey daallo Airlines si ay uga qaado Jabuuti.
Diyaaradda Turkish Airlines ayaa joojisey duulimaadkeedi Muqdisho oo ay muddo dheer tegi jirtey, isla markaana dhistey garoonka, hay’ad Turkish ahna ay maamusho. waxaana weerarkaas lagu eedaynayaa in ay fududeeyeen masuuliyiin ka tirsan hay’adda sirdoonka dowladda federaalka Soomaaliya ee NISA.
Gabdho please is ilaaliya oo Qaata waanada gabadhaan Runta ayeey ka hadashay
LABA CUMAR SHOOLI Oo markale isku dhagay -Maxkamad loo balansan yahay